Mhirizhonga ine mhirizhonga inoitika muSwitzerland pamusoro pepasipoti dzeCOVID-19
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Switzerland Kuputsa Nhau » Mhirizhonga ine mhirizhonga inoitika muSwitzerland pamusoro pepasipoti dzeCOVID-19
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Hurumende Nhau • Health News • Kodzero Dzevanhu • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Switzerland Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Mapurisa eBern akasimbisa chivakwa cheparamende uye akashandisa makanoni emvura, misodzi nemabara erabha kuti vaparadzire nesimba boka revanhu vaiita mhirizhonga.
Ichitsanangura kukwira kwenhamba yezviitiko zvitsva zvemakoronavirus, hurumende yeSwitzerland yakaburitsa Inosungirwa COVID-19 mapasipoti anoshanda munaGunyana 13.
Huru vanhu vakapfuura nepakati peBern, vachiimba "rusununguko" nekushungurudza mapurisa.
Mapurisa eBern akashandisa makanoni emvura, gasi rinobvarura nemabara erabha kuti vaparadzire mhomho yevanhu vaiita mhirizhonga.
Manheru ano anti-COVID-19 matanho erally muBern akarambidzwa nezviremera uye zvakamiswa nevanoronga, asi vanhu vazhinji vakaramba vachiratidza uye vachifamba nemuguta guru reSwitzerland, vachiimba "rusununguko" nekushungurudza mapurisa eBern.
Sezvo husiku hwainge hwava, zviremera zvakapindura nekushandura makoni emvura kune vairatidzira vachiratidzira vachipesana nemapasipoti-akarairwa nehurumende eECVID-19. Kune zvakare mifananidzo yemapurisa emhirizhonga anopfura girosi yemisodzi inotenderera pasocial media zvakare.
Vamwe vevaratidziri vakakanda zvinhu kumashure kumapurisa, vachiridza muridzo nekupopota.
Pakutanga mavhidhiyo nemifananidzo kubva Bern kuratidza mapoka evanhu achiungana panzvimbo yekufambisa uye vachiimba "Liberte!" - 'rusununguko' muchiFrench, mumwe wemitauro unoshandiswa mu Siwizarendi. Rwiyo irworwo rwakashandiswa muFrance yakavakidzana kuratidzira mapasipoti eCODV-19.
Gare gare, boka revanhu rakafora richidzika nemigwagwa ye Bern akananga kuparamende.
Mapurisa anga akasvinura kubvira mangwanani, zvisinei, vachimisa ruzhowa rwekutenderedza Bundeshaus, chigaro cheparamende yeSwitzerland.
Varatidziri vachipokana nepashure peichi COVID-19 ichangopfuura vakarwisana nemapurisa kunze kwechivako cheparamende. Bern security director Reto Nause akaritsanangura semuyedzo wekuti "vapinde mumuzinda wamubatanidzwa," uye zviremera vakapindura nekuparadzira varatidziri nemidziyo yemvura uye kurambidza misangano yemberi "isingatenderwe".
Ichitaura kuwedzera kwehuwandu hwezviitiko zvecoronavirus, Siwizarendi yakabvisa mapasipoti anomanikidzwa eECVID-19 anoshanda munaGunyana 13. Chitupa chinoratidza humbowo hwekubaiwa, kupora kana zvichangoburwa zvakaipa muedzo, uye unofanirwa kuunzwa kuti upinze maresitorendi, mabhawa, majimu kana dzimwe nzvimbo dzeruzhinji dzevanhu. Chiyero chakatarwa kupera muna Ndira 2022.